Dewar Factory - China Dewar Abakhiqizi nabaphakeli
U-Liquid Argon Cylinde
Isakhiwo seflaskhi yasemanzini Ithangi langaphakathi negobolondo langaphandle leDewar zenziwe ngensimbi engagqwali, futhi uhlelo lwangaphakathi lwethangi lwenziwe ngensimbi engagqwali ukwenza ngcono amandla futhi kunciphise ukulahleka kokushisa. Kukhona ungqimba lokufaka okushisayo phakathi kwethangi langaphakathi negobolondo elingaphandle. Izinto zokwehlukanisa ezishisayo eziningi kanye ne-vacuum ephezulu kuqinisekisa isikhathi sokugcina samanzi. I-vaporizer eyakhelwe ngaphakathi ihlelwe ngaphakathi kwegobolondo ukuze iguqule uketshezi lwe-cryogenic lube yigesi, kanye nezinto ezakhelwe ngaphakathi ...
Isakhiwo sebhokisi le-Dewar Ithangi langaphakathi negobolondo langaphandle leDewar zenziwe ngensimbi engagqwali, futhi uhlelo lwangaphakathi lwethangi lwenziwe ngensimbi engagqwali ukwenza ngcono amandla futhi kunciphise ukulahleka kokushisa. Kukhona ungqimba lokufaka okushisayo phakathi kwethangi langaphakathi negobolondo elingaphandle. Izinto zokwehlukanisa ezishisayo eziningi kanye ne-vacuum ephezulu kuqinisekisa isikhathi sokugcina samanzi. I-vaporizer eyakhelwe ngaphakathi ihlelwe ngaphakathi kwegobolondo ukuze iguqule uketshezi lwe-cryogenic lube yigesi, kanye ne-su eyakhelwe ngaphakathi ...
Isakhiwo sebhokisi le-Dewar Ithangi langaphakathi negobolondo langaphandle leDewar zenziwe ngensimbi engagqwali, futhi uhlelo lwangaphakathi lwethangi lwenziwe ngensimbi engagqwali ukwenza ngcono amandla futhi kunciphise ukulahleka kokushisa. Kukhona ungqimba lokufaka okushisayo phakathi kwethangi langaphakathi negobolondo elingaphandle. Izinto zokwehlukanisa ezishisayo eziningi kanye ne-vacuum ephezulu kuqinisekisa isikhathi sokugcina samanzi. I-vaporizer eyakhelwe ngaphakathi ihlelwe ngaphakathi kwegobolondo ukuze iguqule uketshezi lwe-cryogenic lube yigesi, kanye nezinto ezakhelwe ngaphakathi ...
Isakhiwo sebhokisi le-Dewar Ithangi langaphakathi negobolondo langaphandle leDewar zenziwe ngensimbi engagqwali, futhi uhlelo lwangaphakathi lwethangi lwenziwe ngensimbi engagqwali ukwenza ngcono amandla futhi kunciphise ukulahleka kokushisa. Kukhona ungqimba lokufaka okushisayo phakathi kwethangi langaphakathi negobolondo elingaphandle. Izinto zokwehlukanisa ezishisayo eziningi kanye ne-vacuum ephezulu kuqinisekisa isikhathi sokugcina samanzi. I-vaporizer eyakhelwe ngaphakathi ihlelwe ngaphakathi kwegobolondo ukuguqula uketshezi lwe-cryogenic lube igesi, kanye nokwakhelwe ngaphakathi ...